UHLONISHWE NGEZIQU ZOBUSOLWAZI WAKHUTHAZA UKUZEHLISA KUBANTU – Sivubela intuthuko Newspaper
UHLONISHWE NGEZIQU ZOBUSOLWAZI WAKHUTHAZA UKUZEHLISA KUBANTU
USOLWAZI Jabulani Dladla egaxa iziqu zobuSolwazi uNorman Mkhize
UKHUTHAZE ukuthobeka nokuzehlisa usomabhizinisi waseMgungundlovu ohlonishwe ngeziqu zobudokotela ngeqhaza alibambile ekuthuthukiseni abantu baseMgungundlovu ikakhulukazi izingane njengoba kukhona ezisezikhungweni zemfundo ephakeme ezifundayo ngenxa yosizo lwakhe.
USolwazi Norman Mkhize uhlonishwe ngalezi ziqu ezikhethekile ngabeNew Hope School of Theology esinesizinda enkabeni yedolobha uMgungundlovu. Umcimbi wokuhlonishwa kukaKhabazela obuye abe nguMbhishobhi waseNyonini Zion Mission KwaZulu-Natal naseSwazini bewuseWinston Churchil Theatre eScottsville khona eMgungundlovu.
Ekhuluma uSolwazi Connie Ngubane waseNew Hope School of Theology ngokubenze bahlonipha uSolwazi Mkhize ngalezi ziqu ucacisele abebelapha ngokuhlonipha uSolwazi Mkhize ngeziqu zobusolwazi ekuthuthukisweni komphakathi ethi bezimfanele ngenxa yokukhathalela impilo yabantu. Uncome ukukhathalela kwakhe inhlalakahle kubantu njengoba kunezingane ezifundaya azisekayo kusukela zisesemabangeni aphansi kuze kufike nasezikhungweni zemfundo ephakeme aze azisize ngokuthola izincwadi zokushayela izimoto. “Kuyaxaka ukuzwa abantu uma bebona umuntu ephumelela kukhona akwenzayo bethi uthwele. Uma uthi umuntu uthwele futhi uyabona ukuthi uyaphumelela pho wena uvinjwe yini ukuya kuleyo nyanga athwaliswe yiyona nawe uthwale?” kubuza uSol Ngubane.
Okunye okuvele ngoSolwazi Mkhize kuthiwa wabamba elikhulu iqhaza kwezikanobhutshuzwayo njengoba wabumba amagatsha angu-65 abalandeni beKaizer Chiefs KwaZulu-Natal njengoba leli qembu linabalandeni abaningi kulesi sifundazwe. Kuthiwa uSihlalo weKaizer Chiefs uDkt Kaizer Motaung waphatheka kabuhlungu ngesikhathi uMbhishobhi Mkhize esebeka phansi izintambo zokuba nguSihlalo waleli qembu eMgungundlovu esabela ukuthi lizolahlekelwa ngabalandeli ngenxa yokuba yisishabasheki kwakhe ekuxhumaneni nabalandeli. USolwazi Mkhize uthe lokhu okwenzekile ucela abantu bangakutoliki kabi baze babe nemidlinzo ngakho. Uthe konke anakho kungukuhlonipha uNkulunkulu nokwazi indawo abekwe kuyona. “Inselelo engiyiphonsa kosomabhizinisi nabefundisi ngukuzihlonipha njengoba bekhethiwe ukuba ngababheki babantu. Konke esikwenzayo makube ngukuthi sikuyalelwe nguNkulunkulu singenzi ngokuthanda kwethu. Ebandleni kunabefundisi abayisikhombisa engabathengela izimoto futhi ngingabheke nkokhelo ngalokho,” usho kanje.
USUVULWE NGOSEMTHETHWENI UMTAPO WOLWAZI ELIZOSETSHENZISWA NGABANGABONI EMEHLWENI
Itsha yaseMgungundlovu izocijwa ngomkhakha wezamafilimu
ABELUTHULI Museum bazigqaja ngoDkt Gcina Mhlophe
Kubhekwe amanxusa ngenhlanzeko eMgungundlovu